HVAC FAQs - Beijing Holtop Hawada Co., Ltd.
Waa maxay Energy neefsashada kabashada?
hawo kabashada Energy (KQA) waa geedi socodka dib u soo kabashada tamarta ee kala beddelashada tamar ku jira dhismaha si caadi ah u daalay ama hawada bannaan oo aad u isticmaasho in lagu daweeyo (shardi) hawada hawo dibedda u soo socda ee hababka HVAC degaanka iyo ganacsiga. Inta lagu jiro xilli diiran, nidaamka pre-qaboobeyso iyo dehumidifies halka humidifying iyo pre-kululaynta ee xilli qabow. faa'iido u ah iyadoo la isticmaalayo dib u soo kabashada tamarta waa awood u leh inay la kulmaan hawo & tamarta heerarka ASHRAE, halka hagaajinta tayada hawada gudaha iyo yaraynta tirada guud ee awoodda qalabka HVAC.
In eray, Energy Recovery Ventilator (KQA) ogolaanaya hawo cusub galay dhismaha, halka xafidaada kululaynta pre-shuruud ama qaboojinta.
Waa maxay sharaxaad model ah?
Heat & Energy Recovery mishiinada neefsashada
Fiiro gaar ah: nooca Rakibaadda
nooca ganaax, nooca L-Floor
XHBQ-D10TH loola jeedaa ganaax KQA nooca la total Iskubedelka kulaylka, taxane TH, fl hawada ow of 1000m3 / h, 3 xawaare.
Sidee in ay doortaan ahu?
Holtop ahu waxaa loogu talagalay oo loo doortay sida ay software xirfadeed, bixinta users leh macquul ah, dhaqaale, iyo wax ku ool ah xal qaboojiyaha. The sifooyinka of software xulashada Holtop ahu ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah:
Mashruuca Sound iyo maamulka su'aal ahu
hawada sugan oo unit kooxihii qaybta
fursadaha soo kabashada kulayl badan iyo qaybta isku functional
Xisaabinta dhibic gobolka hawada ah qaybaha ugu muhiimsan ee
meelo kala duwan optional
l-gaynta unit debecsan
l Professional iyo xulashada faahfaahsan oo sheegay in wax soo saarka
Ma Waxaad siisaa ahu Service Design?
U samaynta aad mashruuca isticmaalaya Units Qabashada Holtop Air
Holtop Ahus ku salaysan yihiin design a si buuxda u qaybsan, oo awood u qabsado baahiyaha kala duwan ee noocyada loo xirxiro, iyo in la horumariyo by bixinta si tamarta fiiro gaar ah. Fadlan faahfaahinta mashruuca iyo shuruudaha intii aad sidaas darteed waxaan ka dhigi karin jeedinta a idiin sida ugu dhaqsaha badan.